Angola: “Alambamento” Sy Ireo Fombafomba Fampakarambady · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Clara Onofre Nandika (en) i Janet Gunter, Abdoulaye Bah, Sylvia Aimée
Voadika ny 06 Aogositra 2018 15:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, srpski, বাংলা, Português
Mampiseho ny famaritana antsipirihany an'io tranga io ny blaogy Muxima N´gola [amin'ny teny paortiogey, sahala amin'ireo rohy rehetra]:
Manoritsoritra ny alambamento ihany koa ny blaogy Tre Angolando amin'ny fanipihana ny maha-zava-dehibe ny lisitra omena ny tovolahy:
Raha toa ka bevohoka ilay tovovavy, mitombo betsaka kokoa ny lanjan'ireo zavatra voalaza eo ambany ireo, araka ny voalazan'ny blaogy Tre Angolando:
Dia toy izao no fisehon'ny tantara, araka ny voalazan'ny blaogy Muxima N´gola :
Manomboka amin'io masonandro io, raha mizotra tsara ny rehetra, manjary mpivady izy roa kely. Mandritra ny fety fankalazana ny fanambadiana, miankanjo an'ireo fitafiana nentin-drazana ireo mpanambady sasany ary ireo sasany kosa misafidy ny akanjo mihaja miaraka amin'ny karavaty, raha toa ireo vehivavy mpanambady miakanjo fotsy nentin-drazana. Mitantara i Débora Cecília, mpanoratra ny blaogy Teto de Estrelas [Tafo Manjelatra] fa nandray anjara tamina fanambadiana iray izay nanasàna azy tany Cabinda, any avaratry ny firenena.
Tsy mitovy amin'izay naha-izy azy taloha ny fomba ; na dia mbola miorim-paka ao anaty kolontsaina angoley aza ny alambamento, raha ny marina, tsy dia ampiasaina loatra intsony izy io amin'ny fiainana moderina, ary tsy ao Angola irery ihany. Miresaka ny alambamento ao Mozambika i Sandra Flosi eo amin'ny blaogy Mosanblog, izay fianakaviana sasantsasany no efa niala tamin'io fomba io, raha toa ireo hafa, mbola tena mitahiry azy tsara, manao azy ho tsy maintsy hajaina. Mandritra izany fotoana izany, manaiky ny maha-zava-dehibe ny alambamento ny fiarahamonina angoley ary mampiasa dokambarotra amin'ny fahitalavitra mihitsy aza.